10 sano ka hor ayaa Anna Lindh lagu toorriyeeyey bartamaha Stockholm - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Anna Lindh, wasiiraddii hore ee wasaaradda arrimaha dibedda Iswiidhen (7 oktoober 1998 – 11 sebteember 2003). Sawirle: Fredrik Sandberg/TT
10 sano ka hor ayaa Anna Lindh lagu toorriyeeyey bartamaha Stockholm
La daabacay tisdag 10 september 2013 kl 09.28
Maanta waxaa ka soo wareegtay toban sano markii wasiiraddii arrimaha dibedda ee Iswiidhen Anna Lindh middi caloosha laga geliyey iyadoo dhexjoogta dukaanweynaha Nk ee ku yaal bartamaha magaalada Stockholm.
Anna Lindh waxay ku sugneyd qaybta dharka ee dukaanweynaha NK kolkii uu Mijailo Mijailovic middi ama toorrey caloosha ka geliyey. Waxaa kolkaas Anna Lindh la socdey saaxiibteed oo ay isla shaqeeyaan oo lagu magacaabo Eva Franchell oo u jeeddey sidii uu Mijailovic u weeraray Anna Lindh oo middida u geliyey.
Eva Franchell oo hadda tifaftire ka ah wargeyska Aftonbladet waxay Anna Lindh ku sifeysey in ay hayd ruux karti badan u lahaa in uu dadka isu keeno oo ka kasbado in ay wadashaqeeyaan. Waxayna intaas raacisay in ay taasi ka maqnayd siyaasadda xisbiga Sooshiyaal-dimoqraadiga tobankii sano ee ugu dambeeyey.
Dhanka kale ciidamada nabadsugiddu ayaa labanlaabay shaqaalahooda ilaaliya ammaanka siyaasiinta intii ka dambeysey dilkii Anna Lindh.
– Waxaan horumarinay hababka aan u shaqaynno. Waxaanuna abuurnay habab cusub oo aan ku aragno khataraha soo socda. Sidoo waxaan isbeddelo ku samayney habab loo ilaaliyo shakhsiyaadka. Hawlaha dhawrista ammaanku maan aad ayey uga duwan yihiin kuwii sannadkii 2003. Dhacdadaas ayaana si weyn saameyn ugu yeelatay hawlahayaga ilaalinta shakhsiyaadka. Sidaasna waxaa yiri Niklas Åström oo ah ku simaha kuxigeenka madaxa waaxda ilaalinta shakhsiyaadka ee ciidamada nabadsugidda.
Kadib dilkii wasiirkaas arrimaha dibedda waxay ciidamada nabadsugiddu shaandheyn ku sameeyeen hawlahooda.Kolkaas waxaa waaxda qaabbilsan ilaalinta xubnaha dowladda, xildhibaanada iyo qoyska boqorka ka shaqaynayey 60 qof, maantana waxaa ka shaqeeya 130 qof.